Misoro yenhau, Chishanu, Chivabvu, 06, 2022
Vechidiki veZanu PF vanopeta musangano wavo muHarare vachibuda nezvisungo zvinosanganisira chekuti mutungamiri webato ravo uye vari mutungamiri wenyika, VaEmmerson Mnangagwa, vakwikwidze vakamirira bato muna 2023, Patriotic Bill uve mutemo, uye kuti vechidiki vose munyika vatange vapinda muchirongwa cheNational Youth Service vasati vaenda kuzvikoro zvepamusorosoro.
Nhengo yeparamende inomirira Warren Park, VaShakespear Hamauswa veCitizen’s Coalition for Change, vanosimudza pfungwa kana kuti motion yekuti paramende izeye nezvehurongwa hwekuwedzera mari kubhajeti remakanzuru emadhorobha nemaruwa rakanangana nemvura kuitira kugadzirisa dambudziko rekushaikwa kwemvura munyika.
Mudzimai wemutungamiri wenyika, Amai Auxilia Mnangagwa vanopiwa ruremekedzo rwedhigirii repamusorosoro re Doctor of Philosophy ne Goenka University yeku India semucherechedzo wemabasa ekubatsira vanotambura avari kuita munyika.
Bhanga re NEDBANK remuZImbabwe roita musangano wemadzimai ari mumamubhizimusi richivavarira kubatsira mudzimai wanhasi kuti awane rubatsiro rwemari dzezvikwereti, ruzivo rwekuita bhizimisi muZimbabwe uye kutsvaga misika yekutengesera.
Mujaho mukuru wemabhiza weCastle Tankard uriko mangwana uchisangana nemitambo yenhabvu yeCastle Lager Premier Soccer League.
Muchirongwa cheLiveTalk nhasi na8:00pm tiri kutarisa nezvematambudziko ekushaya zvekufambisa ari kutarisana nevanhu munyika pamwe nehurongwa hwekuratidzira kukuru huri kuda kuitwa nemusi wemuvhuro nemamwe masangano.